पहल गर्न सके १४ जनाका परिवारले क्यानाडामा शरण पाउन सक्छन् । - Enepalese.com
पहल गर्न सके १४ जनाका परिवारले क्यानाडामा शरण पाउन सक्छन् ।
इनेप्लिज २०७३ असार ८ गते १९:०६ मा प्रकाशित
अफगानिस्तानमा क्यानाडाका सैनिकका लागि द्धेभाषेको काम गर्ने इन्टरप्रेटरले क्यानाडामा शरण पाएको थियो । अफगानिस्तानमा क्यानेडिन राजदूतावासको सुरक्षाका लागि खटिएका १४ जना नेपालीका लागि उचित न्याय दिलाउन पहल गरिदिने संस्थाको खोजि भईरहेको छ । यो दायित्व प्रथमतःआफुलाई आप्रवासी नेपालीको अविभावक भन्ठान्ने एन.आर.एन. ले लिनु पर्ने हो । त्यसमा पनि क्यानाडाको दुतावासको सुरक्षाका लागि खटिआएका नेपालीहरु भएकोनाताले पनि एन.आर.एन. क्यानाडाले यसको पहल शुरु गर्नु पर्ने हो । हुन त राजनैतिक उद्देश्य लिएर खोलिएको नेपाली जनसम्पर्कसमिति क्यानाडाले आज प्रेश बिज्ञप्ति जारी गर्दै काबुलमा सोमबार भएको आत्मघाती हमलाबाट चौध जना नेपाली को मृतु एवं घाइते भएको पिडितहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति को ब्यबस्थाको लागि लबिङ्ग गरि क्यानाडा सरकार, प्रधानमन्त्री, विदेश मन्त्रालय र सदनको ध्यानाकर्षण गराउने काम भैरहेकोजनाएको छ । यो एउटा उदाहरणीय कार्य हो । यसमा क्षतिपूर्तिका लागि मात्र हैन क्यानाडाले कुनै पनि देशका पीडितहरुको सहयोग गर्ने कार्यका मानवताको उदाहरण देखाएको छ । सुनौलो सपना बोकेर विदेशिएका नेपाली युवाहरुको विदेशिने बाध्यताको यथार्थता हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो । १०वर्षको जनयुद्ध र त्यसपछि देखा परेको अस्थिर राजनीतिक उतारचढाउँ र दल तथा दलका नेताहरुको स्वार्थ नीतिले देशलाई जरजर पारिदिएको छ। कलकारखानाहरुमाथि तगारो लागेपछि विकासका ढोकाहरु एकएक गर्दै बन्द हुन थाल्यो र रोजगारीको समस्याले गर्दा प्रत्येक दिन हजारौंको संख्यामायुवाहरु पलायन हुँदे गईरहेका छन् । अफगानिस्तान जस्तो बारुदको भूमिमा ज्यानको बाजि राखेर आफ्नो परिवारलाई दुई छाक जोड्न पुगेका वीर नेपालीहरुको पसिनाले कमाएको पैसाबाट आउने रेमिटेन्सबाट देश चलेको छ । देशका नेताहरुको खर्च चलेको छ । देशका दलहरुलाई दामासाहीले बाड्ने खर्चचलेको छ भन्ने वास्तविकता कतैबाट लुकेको छैन । तर तिनै वीरहरुको बलिदान बाकसमा आउदा पनि राष्ट्र मौन छ । उनीहरुको पीडालाई स्मरण गर्दै सेतोपाटीमा सुनसरीका बीरबहादुर खत्रीले आफ्नो पीडा बिसाएर वास्तविकता सुनाएका थिए । यसरी अकालमै मृत्युवरण गर्नेहरुमा सुनौलो सपना बोकेरविदेशिएको मात्र ११ दिन पुगेकाहरु पनि थिए । खत्रीसँगै काबुल पुगेका साथीलाई सम्झदै ‘हाँसीखुसी सँगै गएका थियौं, फर्किँदा साथीलाई बाकसमा ल्याउनुपर्दा मुटु चिरिएको छ’ भन्दै भकानो छोडेका थिए । कतिले त भर्खर जन्मेको सन्तानको अनुहार पनि हेर्न पाएका थिएनन् ।
काबुलमा १ सय ४७ जना नेपाली साब्र कम्पनीमार्फत् क्यानेडियन राजदूतावासको सुरक्षामा खटिन्थे। त्यो क्षेत्रमा बेलायत र जापानको राजदूतावास पनि छ। राजदूतावासदेखि उनीहरू बस्ने क्याम्प तीन किलोमिटर टाढा थियो। गाडीमा १० मिनेटको बाटोमा पर्ने क्यानेडियन राजदुतावासमा एकपटकमाबसले २१ जनालाई ओसार्ने गथ्र्यो । एउटा बसले ल्याउने र अर्को बसले फर्काउने गथ्यो । पहिलो बस क्याम्पको गेटबाट निस्किसकेपछि लगतै निस्केको अर्को बसमा आत्मघातीले बम पड्काइ हाल्यो। तालिबानी समूहको आत्मघाती हमलामा परेपछि १४ जना नेपाली वीरहरुको ज्यान गयो र चारजनानेपाली घाइते भएका छन् । यसरी अफगानिस्तानमा बाँच्ने ग्यारेन्टी नभएको ठानेर अहिले नेपाली कामदारहरु आफ्नो पाउने तलब छोडेर घर फर्कदै छन् । उनीहरूले अब अफगानिस्तान मात्र होइन विदेश नै नजाने सोच बनाएका छन्। तर के राष्ट्रले उनीहरुलाई बाच्ने मौका दिन्छ वा दलको सदस्यबनाएर नेपालबन्दमा टायर बाल्न र आन्दोलनको नाममा एन सेलको टावर ध्वस्त पार्न खटाउछन् ? अफगानिस्तानको घटनापछि २४ जना नेपालीहरु घर फर्केका छन् । तीनदेखि पाँचलाख दलाललाई खुवाएर यस्तो युद्धरत् क्षेत्रमा अरु देशको सुरक्षाका लागि खटिएका नेपालीहरुको पहलमा कस्ले बोल्ने ।यो हमला तालिवानले योजना अनुसार गरेका थिए । नाटो आवद्ध देशका निकायलाई सुरक्षा दिने कसैलाई पनि नछोड्ने तालिवानको अडान भएकाले उनीहरूले नेपालीलाई तारो बनाएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । काबुलमा रहेका विदेशी निकायको सुरक्षामा बाहिरी घेरामा स्थानीय अफगानीहरूहुन्छन् भने भित्रको मुख्य सुरक्षाको जिम्मा नेपाली गार्डलाई दिइएको हुन्छ। त्यसभित्रको घेरामा सम्बन्धित देशका गार्ड बसेका हुन्छन्। अफगानिस्तानमा शान्ती सम्झौतापछि क्यानाडाले २००३ मा आफ्नो को दुतावास खोलेका थिए । त्यसबेलादेखि नेपालीहरु सुरक्षामा खटिएका छन् । नेपालीहरुमरिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै वरिष्ट पत्रकार तथा अन्तराष्ट्रिय मामिलामा कलम चलाउने क्यानाडाका चर्चित पत्रिका सनका स्तम्भकार मेथ्यु फिसरले आफ्नो स्तम्भमा नेपालीहरुको बहादुरीको इतिहासका पानाहरु पल्टाउँदै विश्वभरी नै नेपालीहरु वीरताका चिनिएकाले विशिष्ट सुरक्षामा खटिआएकोजानकारी गरायदै यसलाई कायरताको उदाहरण दिदै क्यानाडा सरकारसँग उनीहरुको क्षतिपूर्तिका लागि माँग गरेका छन् । क्यानाडाका प्रधानमन्त्री टु«डोले यसलाई कायरताको नमूना भनेका छन् भने अफगानिस्तानकालागि क्यानेडियन राजदुत क्रिस एलेक्जेन्डरले नेपालीहरुको बहादुरी र साहसकोप्रसंशा गर्दै यो कायरतापूर्वक गरिएको घटनाको भत्सर्ना गरेका छन् ।
अफगानिस्तानको घटनालाई नियालेर हेर्दा त्यहाँ मारिएका नेपालीहरु त्यहाँ जानुको बाध्यता भनेको देशमा रोजगारीसँगै शान्ती सुरक्षाको कमीलाई रहेकालाई नकार्न सकिदैन । उनीहरु त्यहाँ काम गर्न जाने क्रममा शहिद भएका हुन् । यसैलाई आधार बनाएर क्यानाडाको दुतावासका लागि खटिएका यी१४ जना नेपालीहरुका परिवारलाई क्यानाडा सरकारले शरण दिनु पर्ने कार्यका लागि पहल गरिदिने दरिलो संस्थाको खाँचो छ । क्षतिपुर्तिभन्दा वीरगति पाएका १४ जनाका सन्तानले सुरक्षित शरण र शिक्षा पाउन सके अफगानिस्तान जस्तो ठाँउमा आएर काम गर्नु पर्ने बाध्यता भनेको आफ्ना सन्तानलाईशिक्षाको कवच दिनु रहेकोले उनीहरुका बुवाले देखेको सपना क्यानाडा सरकारले पुरा गरिदिन सक्छ । क्यानाडा सरकारले आफ्नो आप्रवासी नीति अनुसार प्रत्येक वर्ष ५० हजार शरणार्थी भित्र्याउने अठोट गरेको छ । मानवीयताका आधारमा यी १४ जना शहिदका परिवारलाई नियमानुसार शरण दिनमिल्छ । यसका लागि उचित पहल र दरिलो संस्थाको खाँचो छ ।